Izindlu ezakhiwe ngamapulangwe e- Cerro Azul - I-Airbnb
Izindlu ezakhiwe ngamapulangwe e- Cerro Azul
I-Hacienda Los Gallos iyindlwana yasezintabeni ethokomele enomuzwa we-rustic kanye nokuhlobisa okuhle. Izungezwe imvelo enhle nemisindo yezilwane zasendle zomdabu, iyindawo ekahle yokubaleka. Uma ujabulela ubhavu oshisayo onombono we-panoramic wedolobha, ukugeza ilanga eduze kwechibi, noma ukuhlola imvelo, kusho ukuthi i-Hacienda Los Gallos iyindawo ekahle. Itholakala emaminithini angu-20 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza noma amaminithi angu-40 ukusuka edolobheni, indlu ihlezi endaweni engamahektha angu-4 entabeni enhle yaseCerro azul.
Indlu inamakamelo angu-4. Amakamelo okulala angu-2 Akhiwe endlini enkulu na-2 endlini yezivakashi. Kunamagumbi okugeza angu-4 aphelele ukuze kusetshenziswe igumbi ngalinye. Iphinde ibe nekhishi elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokuwasha. Izindawo ezijwayelekile zihlanganisa igumbi lokudlela, igumbi lokuhlala, ithala elimboziwe, i-jacuzzi, i-swimming pool, i-BBQ, izingadi.
4.88 · 91 okushiwo abanye
Indlu ihlezi entabeni ebizwa ngokuthi iCerro Azul, emaphethelweni asenyakatho-mpumalanga yedolobha. Kanjalo, awekho amabha nezindawo zokudlela esiphakamisa ukuthi izivakashi zethu zihambe. Uma izihambeli zinentshisekelo kumpilo yasebusuku kanye/noma ukuya ezindaweni zokudlela, ngokuvamile siphakamisa ukuthi amabombo enkabeni yedolobha (40 mins away). Kodwa-ke, uma uthatha isinqumo sokuhlala futhi ujabulele ubhavu oshisayo ozungeze imvelo ngokubuka kwedolobha, kunezitolo ezimbalwa zesuphamakethe eduze lapho ungathola khona igrosa yekhwalithi ephezulu ukuze ulungiselele ukudla ekhaya.
Qaphela: Indlu iza nekhishi elihlome ngokuphelele futhi elinefenisha ephelele, kanye ne-BBQ grill enhle engakhanyiswa ngezinkuni zethu zasendaweni ezivela emhlabeni wethu.
I-Hacienda Los Gallos inabagcini bezindlu ababili abatholakalayo kukho konke ukuhlala kwakho ngaphandle kwezindleko ezengeziwe ukuze banakekele ukuhlanza noma yini oyidingayo maqondana nendlu (lokhu kuhlanganisa nokuthola i-BBQ ihambisana nezinkuni zomdabu). Ezinye izinsiza ezengeziwe zingahlelwa ngokudingekayo ukuze uthole izimali ezengeziwe.
I-Hacienda Los Gallos inabagcini bezindlu ababili abatholakalayo kukho konke ukuhlala kwakho ngaphandle kwezindleko ezengeziwe ukuze banakekele ukuhlanza noma yini oyidingayo maqon…